New Book Ho Avy ela — Trip LEE - OFISIALY SITE
New Book Ho Avy ela
My boky vaovao, Mitsangàna, mivoaka 27 Janoary! Ho hita na aiza na aiza boky amidy. Azonao atao ny manafatra azy io izao ary mitsidika ny tranokalan'ny boky ao amin'ny Risebook.tv. Mivavaka aho ny Tompo dia hampiasa azy io mba hampaherezana ny taranaka mba hitsangana ka ho velona. Jereo ny tranofiara ambony ary vakio ny famaritana fohy ny boky eto ambany:
Hoy i Society tanora dia fotoana tena mampamaky loha-teny, Hoy i Lee fa ny Trip Andriamanitra efa niantso ny rehetra mba hitsangana avy amin'ny torimaso, ambony ambany fanantenana, ary ho velona ho nitsangan-ko velona Mpanjaka.
Izao tontolo izao dia milaza amintsika fa ny voalohany taona dia ho irresponsibly nahafinaritra fa tsy natokana ho manan-danja mikatsaka. Isika dia nilaza fa ny andraikitra sy ny fanoloran-tena no enta-mavesatra mba hatao eny, raha mbola araka izay azo atao. Ary noho izany, ankamaroantsika mandany ny tanora amin'ny malahelo fanjakana sondrian-tory-natory tao ny fiainana mandra-isika dia voatery mifoha. Ny olana dia ny fiainana efa nanomboka. Izany no mitranga amin'izao fotoana izao. Ary Andriamanitra efa niantso anareo ho miaina izany.
Ao amin'io boky mahery, Trip Lee milaza tonga ny fotoana mba hifoha sy RISE, mba hiaina ny fomba noforonina hiaina. Tanora na antitra, efa nantsoina isika mba hiaina ho Azy. Izao dia izao. Young mpino ihany hiatrika ny olana toy ny zokiolona ny Kristianina, fa mahatsapa azy ireo amin'ny fomba miavaka. RISE miteny ireo olana fototra amin'ny hanintona, lalina, sy ny fiainana-nanova ny fomba.
Aza mipetraka fotsiny any: RISE!
Burton • Desambra 4, 2014 amin'ny 6:29 PM • navalin'i
David • Desambra 25, 2014 amin'ny 3:25 PM • navalin'i